ဒီဇငျဘာ 2019 – Healthy Life Journal
Q. အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်၊ ဒေါက်ချွန်ဖိနပ်တွေကို ကြာရှည်စီးတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. ဒီနေ့ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေက ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်၊ ဒေါက်ချွန်ဖိနပ်တွေကို စီးလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ခဏတာသွားတာ၊လာတာလောက်ပဲ စီးတယ်ဆိုရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ...
ငွေကြယ်စင်ယံ ဒိုက်ထိုးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာက တခြားထိုင်-ထလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ တခြားကိရိယာလွတ် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်တာလိုပဲ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ရရှိစေပါတယ်။ ဒိုက်ထိုးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာကြောင့် သန်စွမ်းကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကို မြင့်တက်စေပြီး ထိရောက်တဲ့ အောက်ပါကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းအား သန်စွမ်းစေခြင်း ဒိုက်ထိုးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာက ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ရင်အုံပိုင်း၊...
ကျို့ထိုး သက်သာနည်းများ (Hiccups)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျို့ထိုးတာဟာ ရင်ခေါင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကိုခြား ထားတဲ့ Diaphragm ခေါ်တဲ့ ကြွက်သားပြားပြားခုံးခုံးကြီးက အလုပ်ပိုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ သူ့အောက်မှာ ညာဘက်က အသဲ၊ ဘယ်ဘက်က အစာအိမ်ရှိတယ်။ အဲဒီ ၂ခုထဲက တစ်ခုခုမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ကျို့ထိုးတယ်။ အများဆုံးက လေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာ အစပ်စားလိုက်တာနဲ့...
ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မျက်မှန်ပါဝါရှိသူတို့အနေဖြင့် မြန်မာဆေးမြီးတို၊ တရုတ်ဆေး၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးတို့ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် မျက်မှန်ပါဝါကိုမကျစေနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီး၏ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးဖြစ်သူ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်းက ပြောသည်။ “မျက်မှန်ပါဝါက မျက်ကြည်လွှာအခုံး၊ အခွက်၊ Axial Lenght (လှိုင်းအလျား) ဒီနှစ်ခုအပေါ်မှာ...
လရိပ်မေ အင်္ဂလိပ်မင်းသမီး၊ အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာဖြစ်သူ မင်နီဒယိုင်ဘာက သူလက်မောင်း ကျစ်လျစ်လှပရခြင်း လျှို့ဝှက်ချက်မှာ ရေသန့်ဘူးနှစ်ဘူး ဒါမှမဟုတ် အလေးတုံးတစ်စုံကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ဟထားပါတယ်။ “အပေါ် လက်မောင်းတွေ ပုံစံကျနလှပစေဖို့ ပခုံးကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရပါတယ်။ ရေသန့်ဘူး ဒါမှမဟုတ် အလေးတုံးကို လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကိုင်ပြီး...
Q. တစ်နေ့က လူတစ်ယောက် အဆုတ်ထဲမှာမှိုစွဲပြီး ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးရုံတက်ရက် ၁၈ရက်မှာ ၃ရက်ပဲအသိရှိပြီး ကျန်ရက်တွေက အသိလုံးဝမရှိတော့ဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဆုတ်မှိုစွဲတယ်ဆိုတာ ခေါင်းအုံးကနေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာ ပိုဖြစ်တတ်လို့ ခေါင်းအုံးတွေကို မကြာခဏ နေထုတ်လှမ်းပေးရပါမယ်တဲ့။ မကြာခန...